उद्यमी बहस : ‘चिया क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना तर, चुनौति धेरै’:: Artha Dabali
उद्यमी बहस : ‘चिया क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना तर, चुनौति धेरै’
शान्ता बाँसकोटा कोइराला , निर्देशक, कञ्चन्जंगा टि स्टेट एण्ड रिसर्च सेन्टर
नेपालमा पछिल्लो समय अर्थोडक्स चिया लोकप्रिय हुँदै गएको छ । पहिले विदेशमा राम्रो बजार पाएको ग्रीन टि ले नेपालमा पनि व्यवसायीक रुप लिदै गएको छ ।
लोकप्रिय पेय पदार्थ चियाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा नेपालका धेरै उद्योग संचालित छन् । धेरै उद्यमीको जिविकोपार्जनको आधार बनेको चियाले नेपालको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन पनि गरेको छ ।
नेपालमा वि.स.१९२० मा इलाममा र पछि सोक्तिममा रोपण गरी शुरु भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साना किसान तर्फ १२ हजार ९सय ५६ र व्यवसायिक खेती गार्डेन तर्फ १४हजार ७ सय ३२ गरी जम्मा २७ हजार६ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा चिया खेती भइरहेको छ ।
यस्तै, उत्पादनका सन्दर्भमा गार्डेनको उत्पादन १४करोड ३८ लाख २ हजार ८ किलो र साना किसानको उत्पादन ९८ लाख ८१ हजार ७ सय ३६ किलो गरी जम्मा २४ करोड २६ लाख ३७ हजार ४४ किलो चिया बार्षिक रुपमा उत्पादन भएको बोर्डको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । १५ हजार ४० जना साना किसानको संलग्नता र लगभग ५२ हजार जना मानिस निर्भर रहेको यस खेतीले विश्व वजारलाई वार्षिक रुपमा करिव २ .५५ अर्व वरावरको १३ हजार २ सय ८९ मेट्रिक टन चिया निर्यात गरिरहेको छ । नेपालमा चिया खेती व्यवसायको संभावना प्रचुर छ ।
यसै संदर्भमा कञ्चनजंगा टि स्टेट एण्ड रिसर्च सेन्टरकी कार्यकारी निर्देशक शान्ता बाँसकोटा कोइरालासंग नेपालमा अर्थोडक्स चियाको संभावना, उत्पादन तथा बजारको अवस्थाका बारे कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ उनको विचारको सम्पादित अंश ः
‘ग्रीन टि’ को प्रवद्र्धन गर्न कञ्चन्जंघाको महत्वाकांक्षी उद्धेश्य :
नेपालमा प्रचर संभावना बोकेको अर्थोडक्स चियाको उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपालमै पहिलोपटक अर्गानिक सर्टिफाइड चिया कम्पनि कञ्चनजंधा टि स्टेट सञ्चालन गरियो । बुवा दिपकप्रसाद बाँसकोटाले शुरु गर्नुभएको यस कम्पनिमा म पनि १६ वर्ष देखि कृयाशिल छु । यस कम्पनिले ग्रीन टि, व्ल्याक टि, स्पेसल टि, गोल्ड टि,सिल्भर टि, ह्वाइट टि, लगाएतका अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्छ ।
साथै हामीले लेमन ग्रस टि, कार्डमम टि मसला टि, मिन टि, रोज टि आदि फ्लेवरका चिया उत्पादन गरी स्थानिय बजार देखि अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउदै आएका छौं । हामीले अहिले २४ बटा सम्मको फ्लेवरमा चिया उत्पादन गर्दै आएका छौं । यस कम्पनिको चियाको क्वालिटि राम्रो भएकोले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन पनि सहज भएको छ । ४ वर्षदेखि बाँसकोटा ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजको स्थापना गरी चीयाको बजार विस्तार गरिरहेका छौं ।
चिया खेती : समस्या र चुनौतीहरू
नेपालमा चिया क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समस्याका र चुनौतीहरू रहेका छन् । जसमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बजार विस्तार तथा नेपाली ब्रान्ड स्थापनाको चुनौती देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अर्थोडक्स चियाको अन्तराष्ट्रिय बजार बढ्दो देखिए पनि नेपाली अर्थोडक्स चियाको प्रचार प्रसार एवं प्रयोग प्रभावकारी रुपले हुन सकेको छैन । त्यस्तै, चिया व्यवसायका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था छैन । चिया प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको छैन ।
चिया क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय बीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ । अर्को समस्या भनेको किसानले चियाको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन । उत्पादन भएको चिया टिपेर कारखाना सम्म पुर्याउने मजदुरको अभाव छ । किसानले हरियो पत्ती र प्रसोधित चियाले बराबर मूल्य नपाएका कारण पनि समस्या छ । अर्गानिक रिङभित्र परेका किसान र अर्गा्निक रिङभित्र नपरेका किसानले पाउने मुल्यबीच ठिक दोब्बर फरक छ । सबैको गुणस्तर सुधार गरी एउटै रिङभित्र राख्नु पनि चुनौतिपूर्ण छ । अर्गा्निक उत्पादनको लागि ठूला ठूला मल कारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । मल किनेर किसानले चिया खेति गर्न सक्ने अवस्था सबैसँग छैन ।
अन्तराष्ट्रिय बजारको लागि व्यापारिक चिन्ह
नेपाली अर्थोडक्स चियालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा र्पुयाउन राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले व्यापारिक चिह्न चिया उद्योगीहरूलाई वितरण गर्छ । उद्योग विभागमा दर्ता गरिएको व्यापारिक चिह्न कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापार पनि सहज बन्दै गएको छ । नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टि्फिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्दे्शिका, २०७४ तयार भएपछि नेपालको उत्पादनको आधिकारिक व्यापारिक चिह्न कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उद्योगीले चिह्न प्राप्त गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । व्यापारिक चिह्न सेतो वा कालो रंगको पृष्ठभूमिमा खरानी वा सेतो रंगले दुईवटा हिमालको आकारसहित अङ्ग्रेजीमा ‘नेपाल’ अनि हरियो रंगले ‘टी’ अर्थात् चिया र त्यसको ठीक तल खरानी वा सेतो रंगले ‘क्वालिटी फ्रम द हिमालयज’ अर्थात् हिमालयबाट गुणस्तर लेखिएको हुन्छ । तर उक्त चिह्न प्राप्त गर्न भने निकै चुनौतिपूर्ण छ । हुन त राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अहिले जुन जुन देशहरूमा नेपाली व्यवसायीले आफैंले चिया निर्यात गरिरहेका छन, त्यस्ता देशहरूमा सरकारले तुरुन्त व्यापारिक चिह्न दर्ता गरिदिने भनेको छ । यसको प्रभावकार िकार्यान्वयन भएमा अली सहज हुन्छ ।
व्यावसाय प्रवद्र्धनमा नीतिगत उल्झन
सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेट मार्फत ल्याएको व्यवसाय गर्दा तिर्नुपर्ने कर, पान लिनुपर्ने प्रकृया तथा नियमले साना व्यासायी मर्कामा परेका छन् । कुनै पनि व्यवसायीले ९५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा त्यसको प्यान नम्बर लिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले ९५० भन्दा माथिको १०००, १५०० कै सानोतिनो खरिदबिक्री भइरहेको हुन्छ । काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ । सबैलाई प्यान ल्याउ अनि मात्रै पैसा दिन्छु भनेर काम गर्न सम्भव हुदैन ।
सरकारको ध्यान खाली राजश्व संकलन गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । स्थानीय तहले शुरु गरेको कर असुलीको प्रवृतिले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)देखि प्यान नम्बर नभएका व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई दिइने तलबलाई खर्चमा देखाउन नमिल्ने भनेको छ । यसको अर्थ अब प्यान नम्बर नभएका कर्मचारीले तलब नै नपाउने भए ।
तल्लो तहका मजदुर र श्रमिकहरुले कसरी प्यान कार्ड बनाउने ? प्यान कार्ड बनाउने प्रक्रिया के हो भन्ने पनि थाहा नभएकाले कसरी आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने ? साना व्यापारी तथा व्यवसायीले प्यान कार्ड बनाउनुपर्ने विषयप्रति सरकारले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै सरकारले साना र ठूला सबै उद्यमीलाई एउटै खाले नियम ल्याइदिन्छ । यसले सान व्यवसायीले ठूलासंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसका प्रकृया झन्जटिला हुन्छन् र व्यासायी नै हतोत्साही हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले सरकारले समयमै साना उद्यमीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
प्रस्तुति – तारा वाग्ले